Umaki: indaba yomphakathi ephathekayo | Martech Zone
Umaki: indaba yomphakathi ephathekayo
ULwesibili, April 3, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ukukhangisa kwedijithali kufinyelele esicongweni. Ama-50% abantu abadala bagwema ngenkuthalo izikhangiso kuselula nakudeskithophu kanti amanye ama-47% agwema ngenkuthalo izikhangiso ezingaphakathi nohlelo. Lezi izinombolo ezishayela ithuluzi likaWayin, Izindaba Zomphakathi, ithuluzi elibalulekile labakhangisi bomkhiqizo nabakhangisi. Namuhla, uma abasebenzisi ku-Instagram bechofoza noma beswayipha kwiNdaba exhasiwe, imvamisa kuthatha imizuzwana emihlanu ephelele ukuthi iwebhusayithi yomkhiqizo ilayishwe ngaphakathi kohlelo lokusebenza. Abasebenzisi beselula baphelelwa yisineke, bakhungatheke futhi